Siyaasadda oo sababi karta in Qatar ay weyso martigelinta Koobka Adduunka 2022-ka!!
Thursday, January 24th, 2019 - 09:42:47
Saturday October 07, 2017 - 09:59:22 in Wararka by Kubad Bile
Qatar martigelinteeda 2022-ka Koobka Adduunka ayaa ah khatar muuqata oo ay sababeyso Siyaasadda.
Tan iyo markii dalka Bariga dhexe ku yaalla loo gacan geliyay martigelinta koobka Adduunka oo ay FIFA u dhiibtay 2010-kii – waxaa soo baxayay Eedeymo la xiriira in £153bn ay ku bixisay tartankan sidii ay ku heli laheyd, in kastoo ay dhowaanahan dalalka Gobolka xiriirka u jareen.
Bishii June dalalka Gacanka Carabta ayaa xiriirka u jaray Qatar iyagoo ku eedeeyay taageerada qolyaha Argagixisada ah ee Caalamka – Eedeymahaas Qatar waa ay diidday. Saudi Arabia ayaa ka xiratay xudduudaheeda dhulka iyo Cirka, halka Bahrain, Egypt, iyo United Emirates ay sidoo kale xiriirka u jareen.
BBC ayaa warisay in Daraasad uu taageerayo Cornerstone Global ay ka digtay khataraha ka dhalan kara ciyaaraha Doha oo tartanka martigelin doonta.
Marka loo fiiriyo Human Rights Watch, boqollaal dadka muhaajiriinta ku ah dalkaas ee Shaqeeya ayaa dhintay intii ay isku deyayeen in ay ka shaqeystaan dalkaas isu diyaarintiisa Koobka Adduunka.
Sida ay warbixintu sheegeyso, ‘Qatar ayaa diiradda saareysa: marti qaadka Fifa World Cup 2022 in kastoo su’aashu tahay ma khatar ayaa ka dhalan karta?’, "Tartanka ayey sheegayaan Khubaro gudaha ah in ciyaaraha gudaha Doha ay noqon doonaa kuwo aan sidii la rabay u qabsoomin”.
Cornerstone ayaa warineysa: "Marka la fiiriiyo sida ay hadda ku socoto siyaasaddu… wey dhib badnaan doontaa in tartanka lagu qabto dalka Qatar.
"In laga joojiyo Qatar martigelinta World Cup 2022-ka ayaa la aaminsanyahay in aan sahal xal loogu heli karin.”
Waxay dowladda iyo Muwaadiniinta Qatar sheegayaan in aysan sinaba ku aqbali doonin in koobka Dunida loo weeciyo dal kale, weliba iyagoo sugayay waligood.